अनि बन्छ सिक्स प्याक - Paschimnepal.com
अनि बन्छ सिक्स प्याक
अहिलेको युवापुस्तामा शारीरिक सुगठनप्रतिको मोह एकदमै धेरै रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि सिक्स प्याक एब्स बनाउने ध्याउन्नमा अधिकांश युवा फिटनेस सेन्टर धाइरहेका हुन्छन् । तर, सिक्स प्याक एब्स बनाउन त्यति सजिलो भने छैन । सामान्यतया, ६ देखि आठ महिना लाग्ने गर्छ । यसका लागि खानपानमा उच्च सतर्कता र कडा व्यायाम गर्न अत्यावश्यक छ । त्यस्तै, शारीरिक बनोट, तागत र मिहिनेतमा समेत भर पर्छ । अब जानौँ, सिक्स प्याक एब्स बनाउन आवश्यक टिप्स ।
सिक्स प्याक एब्स बनाउन चाहनेले ड्राई फुड अर्थात् प्रशोधन गरिएका खानेकुरा खानुहुँदैन । यस्ता खानेकुरामा पौष्टिक तत्व कम हुने भएकाले शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्वमा कमी आउँछ । बरु, प्रोटिन, खनिज र भिटामिनयुक्त खानेकुराको सेवनमा जोड दिनुपर्छ । सामान्य अवस्थाभन्दा व्यायाम गरिरहेको समयमा उच्च पौषणयुक्त खानेकुराको आवश्यकता हुन्छ । यसले शरीर सुगठित हुनुका साथै स्वास्थ्यसमेत राम्रो बनाउँछ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, बैशाख ३१, २०७६ 4:16:43 PM
Prevघर कुन दिशामा फर्केको राम्रो ? वास्तुशास्त्र ले यसो भन्छ !
Nextयी हुन् गर्मी मौसममा उपयोगी तरकारी